China Ac Compressor Gadzira Fekitori yeMazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3 vagadziri uye vanotengesa | Hollysen
Kunze kwezvikuru zvakakura zvakazvimiririra mota-inodziya mamhepo mayunitsi, akajairika mota air-kutonhodza macomputer akabatana neiyo huru shaft yeinjini kuburikidza nemagetsi emagetsi. Iyo yekumira uye kutanga kweiyo compressor inoonekwa nekukweva-mukati uye kuburitswa kwemagetsi emagetsi clutch. Naizvozvo, yemagetsi batira chinhu chepamusoro chikamu mune otomatiki kudzora system yemota mhepo-kutonhodza. Iyo inokanganiswa neyekushisa switch (thermostat), kumanikidza switch (kumanikidza relay), kumhanya relay uye kudzora kwesimba switch uye zvimwe zvinhu. Inowanzoiswa kumucheto kumberi kweiyo compressor.
Electromagnetic clutch inonziwo magetsi ekubatanidza. Iyo inoshandisa chirevo chemagetsi emagetsi induction uye kupesana pakati pekunze uye kwekunze kupesana mahwendefa kuita maviri anotenderera zvikamu muchimakanika hutachiona system. Pasi pemamiriro ekuti chikamu chinoshanda hachiregi kutenderera, chikamu chinotyairwa chinogona kusanganiswa kana kupatsanurwa kubva kune yemagetsi magineti kubatana. Icho chishandiso chinhu chinongoitwa chega chemagetsi. Iyo yemagetsi clutch inogona kushandiswa kudzora iyo yekutanga, inodzosera kumashure, yekumhanyisa mirau uye braking yemuchina. Iine zvakanakira chimiro chakareruka, chiito chinokurumidza, diki simba rekutonga, uye inokodzera kure kure; kunyangwe iri diki muhukuru, inogona kuendesa hombe torque; painoshandiswa pakumisa mabhureki, ine zvayakanakira yekumhanyisa uye kutsiga mabhureki.
Disassembly uye yekumisikidza nhanho dzemotokari mhepo-kutonhodza compressor
Maitiro ekukatanura matanho emota mhepo-kutonhodza compressor:
Ongorora: Kuti udzivise kusvibiswa uye hunyoro mumhepo kubva pakumomoka pane zvikamu uye kupinda muchirongwa, zvikamu zvakapatsanurwa zvinofanirwa kuvhurwa nekukurumidza.
PerShandisa nzira yekudzoreredza yemhepo inodziisa mweya.
IscDzvanya isina waya waya tambo yebhatiri.
EmBvisa bhanhire rekutyaira.
EmBvisa iyo yakakwira uye yakaderera kumanikidza mweya yekugadzirisa pombi majoini pane iyo compressor.
IscDzvanya iyo compressor harness yekubatanidza.
EmBvisa iyo compressor inogadzirisa mabhaudhi uye bvisa iyo compressor.
Iyo yekumisikidza maitiro emota mhepo-kutonhodza compressor:
①Install iyo compressor inogadzira sikuru, gadza uye sungisa iyo compressor inogadzirisa bhaudhi.
Batanidza iyo compressor harness yekubatanidza.
Kukwira kumusoro uye kwakadzika kumanikidza mweya-kutonhodza compressor musoro chubhu tekinoroji.
Isa bhanhire rekutyaira.
OnnectBatanidza isina waya waya tambo yebhatiri.
PerShandisa iyo yekuzadza maitiro eair-kutonhodza firiji.
Pashure: Auto Ac Compressor Ye Honda N-BOX / Honda Brio / Honda Jazz
Zvadaro: Auto Ac Compressor uye Clutch Assembly Kugadzira Fekitori YeToyota Passo / Toyota Corolla / Toyota Terios